Huawei ONU Vagadziri | China Huawei ONU Fekitori & Vatengesi
Iyo EchoLife HG8546M, yeinternet network terminal (ONT), iri yepamusoro-yekupedzisira imba suo muHuawei FTTH mhinduro. Nekushandisa iyo xPON tekinoroji, yekuwedzera-Broadband kuwana kunowanikwa kune vashandisi vepamba uye veSOHO. IH8546M inopa 1 * POTS ports, 1 * GE + 3FE auto-adapting Ethernet chiteshi, uye 2 * Wi-Fi chiteshi. IH8546M inoratidzira ekumusoro-mashandiro ekuendesa mberi kugona kuve nechokwadi chakanakisa chiitiko neVoIP, Internet uye HD vhidhiyo masevhisi. Naizvozvo, iyo H8546M inopa yakakwana terminal mhinduro uye neramangwana rinotungamirwa sevhisi inotsigira kugona kweFTTH kutumirwa.
Huawei GPON ONT 1GE + 3FE + CATV + hari + WIFI EG8143A5
Iyo Huawei EG8143A5 inzira yekutenderera-mhando Optical Network Terminal (ONT) - chikamu chakakosha cheHuawei's all-optical access solution - inoshandisa tekinoroji-inokwanisa yePassive Optical Network (GPON) tekinoroji kushandisa Ultra-Broadband kuwana kune vashandisi. Nenzvimbo yepamusoro yekufambisira mberi ichiona chiitiko chinowirirana chevashandisi chezwi, dhata, uye High Definition (HD) masevhisi evhidhiyo, uye kugona-kutsigira basa rekutsigira kugona, EG8143A5 inobatsira mabhizinesi kuvaka ese-Optical access mhinduro dzakatumirwa pazvizvarwa zvinotevera.
Huawei HG8010H FTTH Manyiminya network chinouraya (ONT) chinhu indoor Manyiminya network chinouraya muna Huawei FTTx mhinduro. Nekushandisa tekinoroji yeGPON, kuwana kwe-Ultra-Broadband kunopihwa kune vashandisi vepamba uye veSOHO. Suo repamba rinobva rakabatana nePC, Mobile Terminal, STB, kana Vhidhiyo foni kuti ipe yakakwira-mhanyisa data, vhidhiyo masevhisi.
Iyi modhi inotsigira imwe GE Ethernet interface uye inonyatso kuvimbisa dhata uye HD vhidhiyo sevhisi ruzivo kuburikidza neepamusoro-performance yekuendesa mberi kugona uye zvakare izvi zvinopa vatengi neese-optical kuwana mhinduro uye neramangwana-rinotungamirwa sevhisi rutsigiro kugona.
Huawei HG8245H FTTH inogadzirwa uye inovandudzwa nekambani yeHuawei, inova mutungamiri muFTTH / FTTO Broadband access network network. Iyi modhi inokwanisika kudzora yakawedzerwa nezvakadai senge yakakwira-bandwidth, yakanyanya kuvimbika, yakaderera simba rekushandisa uye inogutsa vashandisi vanodikanwa kuti vawane Broadband, izwi, data uye vhidhiyo nezvimwe. VoIP, Internet uye HD vhidhiyo masevhisi. Naizvozvo, iyo HG8245H inopa yakakwana terminal mhinduro uye neramangwana-rinotungamirwa sevhisi inotsigira kugona kweFTTH kutumirwa.
Huawei HG8245H FTTH inopa 4GE zviteshi + 2 * nhare yefoni uye wifi ine 2 antennas yakakwirira kuwana isina waya basa.
Huawei HG8310M FTTH Manyiminya network chinouraya (ONT) chinhu indoor Manyiminya network chinouraya muna Huawei FTTx mhinduro. Nekushandisa tekinoroji yeGPON, kuwana kwe-Ultra-Broadband kunopihwa kune vashandisi vepamba uye veSOHO. Suo repamba rinobva rakabatana nePC, Mobile Terminal, STB, kana Vhidhiyo foni kuti ipe yakakwira-mhanyisa data, vhidhiyo masevhisi.
Huawei HS8145V5 igwara smart gedhi regigabit fiber smart kumba mhinduro. Flexible application, rutsigiro plug uye kutamba, kure kuongororwa, girini simba kuchengetedza uye mamwe mabasa. HS8145V5 inotsigira GPON tekinoroji, iyo inogona kuona Ultra-Broadband mukana wevashandisi vekumba muFTTH network network. Yayo yepamusoro-yekuita yekufambisa basa inoshanda inovimbisa chiitiko chebasa rezwi, data uye yakakwira-tsananguro vhidhiyo, uye inopa yakanakira terminal mhinduro uye neramangwana-rinotarisana bhizinesi rutsigiro mabasa eFTTH kutumirwa.
Huawei GPON ONT 1GE + 3FE + HOTI + WIFI HS8545M5
Huawei HS8545M5 FTTH ighedhi repamba reimba muFTTH mhinduro. Nekushandisa tekinoroji yeGPON, kuwana kwe-Ultra-Broadband kunopihwa kune vashandisi vepamba uye veSOHO. Huawei HS8545M5 FTTH inoratidzira ekumusoro-kuita kwekutumira ekugona kugona kuona yakanaka chiitiko neVoIP, Internet uye HD vhidhiyo masevhisi. Huawei HS8545M5 FTTH inopa yakakwana chinongedzo mhinduro uye neramangwana-yakatarisana sevhisi inotsigira kugona kweFTTH kuendesa.
EchoLife HG akateedzana Optical Network terminals (ONTs) zvishandiso-zvevashandisi muHuawei Fiber-To-The-House (FTTH) mhinduro uye inotsigira Ultra-bandwidth kuwana kwevemusha kana Diki Hofisi / Kumba Hofisi (SoHO) vashandisi vanoshandisa xPON matekinoroji.
EchoLife HG dzakateedzana ONTs dzinopa POTS zviteshi uye FE / GE auto-kutaurirana Ethernet chiteshi, zvichigonesa yakakwira-kuita kwekutungamira kugona. Simbisa ramangwana-chiratidzo masevhisi neHuawei EchoLife HG akateedzana ONTs, ane matatu makuru mapoka: bridging mhando, bridging + izwi mhando, uye gedhi mhando.
Huawei GPON ONT 1GE + 3FE + HOTI + WIFI EG8141A5
Iyo EchoLife EG8141A5 inopa imwe GE chiteshi, imwe POTS chiteshi, matatu FE madoko uye inotsigira 2.4G Wi-Fi. Iyo ONT inoratidzira yakakwira-yekuita yekuendesa mberi kugona kuve nechokwadi chakanakisa zviitiko neVoIP, Internet, uye HD vhidhiyo masevhisi. Izvi zvinhu zvinoita kuti EG8141A5 ive sarudzo yakasarudzika yekufambiswa kwebandband.
Huawei GPON ONT 4GE + HOTI + mbiri bhendi WIFI EG8145V5
Iyo EchoLife EG8145V5 ingwara yekufambisa-mhando Optical Network Terminal (ONT) muHuawei FTTH mhinduro. Nekushandisa iyo GPON tekinoroji, Ultra-Broadband kuwana inopihwa kune vashandisi vepamba. Iyo EG8145V5 inotsigira 802.11ac mbiri-frequency mabhendi uye inoratidzira yakakwira-yekuita yekuendesa mberi kugona kuona chiitiko chakanakisa nezwi, Internet, uye HD vhidhiyo masevhisi. Aya maficha anoita iyo EG8145V5 sarudzo yakasarudzika yekuwana Broadband kuwana.
Sfp C ++, Optical Fiber Module, External Modulation Transmitter, Xfp Transceiver, Huawei Olt Mutengo, Huawei Qsfp +,